News Collection: श्रीमान् कुमारै हुनुपर्छ भन्ने छैन
श्रीमान् कुमारै हुनुपर्छ भन्ने छैन
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा आईरहेका नायिकाहरु मध्ये शशी खड्का पनि पर्दछिन् । हुनत, उनले खासै धेरै नेपाली सिनेमामा अभिनय गरेकी छैनन् । तर, पनि शशीको चर्चा पछिल्लो समय चुलिएको छ । नेपाली म्युजिक भिडियोदेखि लोकगीतमा समेत उनी छाएकी नै छन् ।
नायिका शशि अहिले ग्ल्यामर क्षेत्रमा आफ्नो छवि वनाउने सोचमा पनि छिन् । उनै नायिका शशी खड्कासग अनलाइनखवरका लागि विजय आवाजले गरेको कुराकानीः
- नामको अर्थ ?
- के कुरा मिठो पकाउन आउँछ ?
चाउचाउ, रोटी र गोलभेडाको अचार ।
- अबको दश वर्षपछि शशिलाई कस्तो रुपमा देख्न पाइन्छ ?
- तपाईको रहर ?
- अभिनयवाट आएको आम्दानीले पुग्छ ?
कलाकारितावाट कमाएको पैसाले अहिलेसम्म पुगेकै छ । स्टेज शो गर्ने भएकाले आम्दानी राम्रै हुन्छ ।
- मनपर्ने सेलीब्रेटी ?
दिलिप रायमाझी ।
- कोसँग डेटमा जान मन छ ?
सलमान खान र सम वन स्पेशल । नाम भने भन्न मिल्दैन ।
- कसलाई देख्दा चुम्बन गरौं झैं लाग्छ ?
- कसलाई देख्दा यौन चाहना बढेको महसुस हुन्छ ?
सलमान खान नै ।
- सेक्स के हो ?
वाँच्ने आधार हो ।
- सेक्सको अनुभव ?
आजका दिन सम्म त छैन् । विहेपछिमात्रै । श्रीमान भने कुमार नै हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
- ब्लू फिल्म हर्नु भएको छ ?
हेरेकी छु । एउटा कार्यक्रममा डान्स गर्न जाँदा । डान्सरले भिडियो क्लिक गरे, म तर्सिए र मोवाइल अफ गरेर बसे । हेर्न चाहेर हेरेको होइन । मेरो लागि त ठूलो कुरा हो । यो उमेरमा यस्तो हेर्‍यो भने मन मोडिन सक्छ । त्यसपछि हेरेकी छैन् ।
- अमेरिका जाने मन छैन ?
मेरो त इच्छा नै वल्र्ड टुर जाने हो । अमेरिका जान किन मन नहुनु ?
- के छ र अमेरिकामै त्यस्तो ?
त्यहाँका मानिस र ठाउँ हेर्न ।
- हिड्दै गर्दा कसैले प्याट्ट हिर्कायो भने ?
मलाई पनि पिट्न मन लाग्छ ।
- कस्तो सिनेमा खेल्न मन छ ?
केटीहरुले गर्दा यस्तो पनि रोल गर्न पाउँदो रहेछन् भन्ने जस्तो । एकदम च्यालेन्जिङ रोल।
-सेक्स प्रस्ताव कत्तिको आउँछन ?
यो समयमा मोडलिङ सुरु गरेको भए त मलाई गाह्रो हुन्थ्यो । सानैवाट मैले अभिनय गरेकाले यस्तो व्यवहार भएन । कफि खान, फिल्म हेर्न जाउँ भन्छन् । तर सेक्सकै प्रपोज भने गरेका छैनन् ।
- कस्तो पुरुष आकर्षक लाग्छ ?
बाहिरी वनावट जस्तो होस् मतलव हुँदैन । केटीलाई रेस्पेक्ट गर्ने, हिम्मतिलो, नयाँ सोच भएको पुरुष मनपर्छ ।
- नेपाली फिल्मको कामुक हिरो ?
नेपालको ? सोच्नै पर्छ ।
- अध्याँरोमा कपडा लगाउँदा दाईको पाइन्टमा कलेज पुगे ?
फेसन हुन्छ नी । कन्पिmडेन्सका साथ जान्छु । नभए स्कुटरमा घर र्फकन्छु ।
- कुनै फ्यानले चुम्बनको प्रस्ताव गरे ?
प्रकार प्रकारका फ्यान हुन्छन् । कसैले क्रेजी भन्लान तर म तपाईले सोचेको जस्तो होइन भन्छु ।
- बिहे कहिले गर्ने त ?
केटो नै भेटेको छैन । ४-५ वर्षसम्म अझै विहेको वारेमा सोंच्दिन । इंगेजमेन्ट भएको ३ वर्षमा गर्छु । विहे भने ५ बर्षपछि मात्रै गर्छु ।